Hydatidiform Mole (စပျစ်သီးသန္ဓေတည်ခြင်း) - Hello Sayarwon
Hydatidiform Mole (စပျစ်သီးသန္ဓေတည်ခြင်း)
Dr. K Zin Thwe မှ ရေးသားသည်။ 17/05/2022 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
Hydatidiform Mole (စပျစ်သီးသန္ဓေတည်ခြင်း) ကဘာလဲ။
စပျစ်သီးသန္ဓေဆိုသည်မှာ သားအိမ်တွင် တည်သော ရိုးရိုးအလုံးဖြစ်သည်။ စပျစ်သီးသန္ဓေသည် မမျိုးဥ မျိုးအောင်သွားပြီး ပုံမှန် သန္ဓေသား ဖြစ်လာရမည့်အစား အချင်းတွင် ပုံမှန်မဟုတ်သော အရည်အိတ်များ ဖြစ်ပေါ်ရာမှ စတင်သည်။ သန္ဓေသားအစစ် မဟုတ်သည့်တိုင် စပျစ်သီး သန္ဓေကိုယ်ဝန်ဆောင်ထားသော အမျိုးသမီးသည် ကိုယ်ဝန်ဆောင်လက္ခဏာများ ခံစားရမည်ဖြစ်သည်။
စပျစ်သီးသန္ဓေကိုယ်ဝန်ကို ချက်ချင်းကုသဖို့ လိုအပ်သည်။ တစ်ရှုးအပိုင်းအစအားလုံးကို ဖယ်ရှားဖို့ လိုအပ်သည်။ ထိုတစ်ရှုးများသည် အချို့အမျိုးသမီးများတွင် ပြင်းထန်သော ပြဿနာများကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။
စပျစ်သီးသန္ဓေအမျိုးအစား နှစ်မျိုး ရှိပါသည်။
ပြည့်စုံသော စပျစ်သီးသန္ဓေ ။ ။ သန္ဓေသား (သို့) ပုံမှန် အချင်း တစ်ရှုးလုံး၀ မရှိပါ။
တစ်ပိုင်းတစ်စ စပျစ်သီးသန္ဓေ။ ။ ပုံမှန် မဟုတ်သော သန္ဓေသား နှင့် ပုံမှန်အချင်း တစ်ရှုးအချို့ရှိပါသည်။ သန္ဓေသား စတင်ဖွံ့ဖြိုးသော်လည်း ပုံပျက်ပြီး အသက်မရှင်နိုင်ပါ။
Hydatidiform Mole (စပျစ်သီးသန္ဓေတည်ခြင်း) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
ထိုအခြေအနေသည် အလွန်ရှားပါးပါသည်။ ကိုယ်ဝန် ၁,၂၀၀ တွင် တစ်ယောက်လောက်သာ ဖြစ်ပါသည်။ အသက်အရွယ်မရွေး ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ရောဂါဖြစ်ပွားနိုင်ချေ မြင့်မားစေသော အကြောင်းရင်းများကို လျော့ချခြင်းအားဖြင့် စီမံနိုင်ပါသည်။ ပိုမိုသိရှိလိုသော အချက်အလက်များအတွက် သင့်ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ပါ။
Hydatidiform Mole (စပျစ်သီးသန္ဓေတည်ခြင်း) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
စပျစ်သီးသန္ဓေ၏ အဖြစ်များသော ရောဂါလက္ခဏာများမှာ
ပုံမှန်ရှိသင့်သော သားအိမ် အရွယ်အစား ထက် ကြီးခြင်း (သို့) သေးခြင်း
ကိုယ်ဝန်ပထမသုံးလတွင် မိန်းမကိုယ်မှ သွေးဆင်းခြင်း
ခြေထောက်၊ ခြေကျင်းဝတ် ဖောရောင်ခြင်း
ကိုယ်ဝန်ဆိပ်တက်ခြင်း အကြိုအဆင့်။ ။ ကိုယ်ဝန် ၂၀ ပတ်နောက်ပိုင်းတွင် သွေးတိုးခြင်း နှင့် ဆီးတွင်း ပရိုတင်းဓါတ်ပါခြင်းဖြစ်စေသော အခြေအနေ။
Hydatidiform Mole (စပျစ်သီးသန္ဓေတည်ခြင်း) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
စပျစ်သီးသန္ဓေသည် ပုံမှန်မဟုတ်သော မမျိုးဥ သန္ဓေအောင်မှုကြောင့် ဖြစ်ပွားသည်။ လူ့ခန္ဓါကိုယ်ဆဲလ်များသည် ခရိုမိုဆုန်း ၂၃ စုံ ပါဝင်သည်။ တစ်စုံတွင် ခရိုမိုဆုန်းနှစ်ခုစီ ရှိပြီး တစ်ခုသည် ဖခင်ဆီက လာပြီး တစ်ခုသည် မိခင်ဆီကလာသည်။
ပြည့်စုံသော စပျစ်သီးသန္ဓေတွင် သန္ဓေအောင်ထားသော မမျိုးဥ၏ ခရိုမိုဆုန်းအားလုံးသည် ဖခင်ဆီကသာ လာသည်။ သန္ဓေအောင်ပြီးနောက် အချိန်တိုအတွင်းတွင် မိခင် မမျိုးဥမှ ခရိုမိုဆုန်းများ ပျောက်ဆုံးခြင်း (သို့) အလုပ်မလုပ်ခြင်း ဖြစ်ပွားပြီး ဖခင် ခရိုမိုဆုန်းများသည် ပုံတူပွားသည်။ မမျိုးဥတွင် အလုပ်မလုပ်သော နယူကလီယက်စ် (nucleus) (သို့) နယူကလီယက်စ် မရှိခြင်း ဖြစ်နိုင်သည်။
တစ်ပိုင်းတစ်စ စပျစ်သီးသန္ဓေ ကိုယ်ဝန်တွင် မိခင်၏ ခရိုမိုဆုန်းသည် ဆက်လက်ရှိနေပြီး ဖခင်ကလည်း ခရိုမိုဆုန်း နှစ်စုံလုံး ထောက်ပံ့ပေးသည်။ ရလဒ်အနေဖြင့် သန္ဓေသားသည် ခရိုမိုဆုန်း ၄၆ ခုအစား ၆၉ ခု ရှိပါသည်။ ထိုအခြေအနေသည် ဖခင် ခရိုမိုဆုန်း ပုံတူပွားသောအခါ (သို့) မမျိုးဥ တစ်ခုနှင့် သုက်ပိုးနှစ်ခု သန္ဓေအောင်သောအခါတွင် ဖြစ်ပွားသည်။
Hydatidiform Mole (စပျစ်သီးသန္ဓေတည်ခြင်း) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာတွေက မြင့်တက်စေသလဲ
စပျစ်သီးသန္ဓေ ဖြစ်ပွားနိုင်ချေမြင့်မားစေသော အကြောင်းရင်းများစွာရှိပါသည်။ ဥပမာ-
အသက်အရွယ် ။ ။ အသက် ၂၀ အောက် နှင့် ၃၅ နှစ်အထက် အမျိုးသမီးများတွင် ပိုဖြစ်ပွားသည်။
ယခင် စပျစ်သီးသန္ဓေကိုယ်ဝန်ဆောင်ဖူးခြင်း။ ။ စပျစ်သီးသန္ဓေသည် နောက်တစ်ခေါက် ထပ်ဖြစ်ပွားတတ်သည်။ ပျမ်းမျှအားဖြင့် အမျိုးသမီး ၁၀၀ တွင် ၁ ယောက်မှ ၂ ယောက် ဖြစ်ပွားတတ်သည်။
အာရှသား (သို့) မက္ကဆီကန် လူမျိုး ဖြစ်ခြင်း
Carotene ဓါတ်နည်းသော အစားအသောက်စားခြင်း။ Carotene သည် ဗီတာမင် အေ အမျိုးအစားဖြစ်သည်။ ဗီတာမင်အေ လုံလောက်စွာမရသော အမျိုးသမီးများသည် ပြည့်စုံသော စပျစ်သီးသန္ဓေဖြစ်ပွားနိုင်ချေနှုန်း မြင့်မားသည်။
Hydatidiform Mole (စပျစ်သီးသန္ဓေတည်ခြင်း) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
အကယ်၍ စပျစ်သီးသန္ဓေကို သံသယရှိလျှင် သင့်ဆရာဝန်သည် အောက်ပါ စစ်ဆေးမှုများကို ပြုလုပ်ခိုင်းနိုင်သည်။
သွေးစစ်ခြင်း ။ ။ Human Chorionic Gonadotropin (HCG) ဟော်မုန်းကို တိုင်းတာသော သွေးစစ်ဆေးမှု
အာထရာဆောင်း ။ ။ မိန်းမကိုယ်တွင် တုတ်တံကဲ့သို့သော ကိရိယာကို ထားပြီး အာထရာဆောင်းရိုက်ခြင်း
ဝမ်းဗိုက် ကွန်ပျူတာဓါတ်မှန် (သို့) သံလိုက်ဓါတ်မှန်ရိုက်ခြင်း
သွေးဆဲလ်များ စစ်ဆေးခြင်း (CBC)
ကျောက်ကပ်နှင့် အသည်း လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု စစ်ဆေးခြင်း
Hydatidiform Mole (စပျစ်သီးသန္ဓေတည်ခြင်း) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
စပျစ်သီးသန္ဓေသည် အများအားဖြင့် အန္တရာယ်မရှိပါ။ လိုအပ်သော တစ်ခုတည်းသော ကုသမှုမှာ သားအိမ်အတွင်းမှ စပျစ်သီးသန္ဓေ တစ်ရှုးအားလုံးကို ဖယ်ရှားဖို့ ဖြစ်သည်။ ကုသမှုသည် အောက်ပါ နည်းလမ်း တစ်ခု (သို့) တစ်ခုထက်ပို လိုအပ်သည်။
သားအိမ်ခြစ်ခြင်း။ ။ သားအိမ်ခြစ်သော နည်းလမ်းဖြင့် သားအိမ်တွင်းရှိ စပျစ်သီး သန္ဓေ တစ်ရှုးများကို ဖယ်ရှားသည်။ ဤနည်းလမ်းကို ဆေးရုံပြင်ပလူနာ လုပ်ငန်းစဉ်အနေဖြင့် ပြုလုပ်နိုင်သည်။
သားအိမ်ထုတ်ခြင်း။ ။ စပျစ်သီးသန္ဓေတစ်ရှုးများ အလွန်များပြားသော အခြေအနေနှင့် နောက်ထပ် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဖို့ ဆန္ဒမရှိသော အခြေအနေမျိုးတွင် သားအိမ်တစ်ခုလုံး ဖယ်ရှားလိမ့်မည်။
HCG ဟော်မုန်း စောင့်ကြည့်တိုင်းတာခြင်း ။ ။ စပျစ်သီးသန္ဓေတစ်ရှုးများ ဖယ်ရှားပြီး နောက်တွင် ပြင်းထန်သော နောက်ဆက်တွဲ ပြဿနာများကို ကာကွယ်ရန် သင့်ဆရာဝန်က HCG ဟော်မုန်း ပမာဏ ပုံမှန်ဖြစ်သည့်အချိန်ထိ ထပ်ခါတလဲလဲ တိုင်းတာလိမ့်မည် (ခြောက် လ မှ တစ်နှစ် အထိ)။ အချို့အခြေအနေများတွင် စပျစ်သီးသန္ဓေကို ဖယ်ရှားပြီးသော်လည်း တစ်ရှုးအချို့ကျန်ခဲ့ပြီး ဆက်လက်ကြီးထွားနိုင်သည်။ ၎င်းကို gestational trophoblastic disease (GTD) ဟုလည်းခေါ်သည်။ GTD ၏ လက္ခဏာတစ်ရပ်မှာ စပျစ်သီးသန္ဓေကို ဖယ်ရှားပြီးသော်လည်း HCG ဟော်မုန်း ဆက်လက် မြင့်တက်နေခြင်း ဖြစ်သည်။
အောက်ပါ လူနေမှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးတွေအသုံးပြုခြင်းက စပျစ်သီးသန္ဓေ ကို ကုသရာမှာ အထောက်အကူပြုနိုင်ပါတယ်။
အရည်အချင်းပြည့်ဝသော ဆရာဝန်နှင့် ပုံမှန် ကိုယ်ဝန်ပြသ၊ ဂရုစိုက်ခြင်း
ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် ပုံမှန် စစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်ခြင်း
ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် နာကျင်မှု၊ မူမမှန်သွေးဆင်းမှုများကို ဆရာဝန်နှင့် ပြသတိုင်ပင်ခြင်း
နောက်တစ်ကြိမ် ကိုယ်ဝန်မဆောင်ခင် ခြောက်လမှ တစ်နှစ်စောင့်ဆိုင်းခြင်း
https://medlineplus.gov/ency/article/000909.html. Accessed September 19, 2016
http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/molar-pregnancy/basics/prevention/con-20034413 . Accessed September 19, 2016.
Molar pregnancy -topic overview.
http://www.webmd.com/baby/tc/molar-pregnancy-topic-overview#2. Accessed September 19, 2016.